सुत्केरी गराउँदा नर्सले बच्चा जबर्जस्ती तानेपछि बच्चाको टाउको र शरीर नै छुट्टियो ! - Himalayan Kangaroo
सुत्केरी गराउँदा नर्सले बच्चा जबर्जस्ती तानेपछि बच्चाको टाउको र शरीर नै छुट्टियो !
Posted by Himalayan Kangaroo | २७ पुष २०७५, शुक्रबार ०८:०७ |
एजेन्सी । सुत्केरी गराउने क्रममा एक अस्पतालमा बच्चाको टाउको र शरीर नै छुट्टीएको छ । गत ६ जनवरीमा भारतको राजस्थान स्थित राम्ग्रह कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा उक्त घटना घटेको हो ।
हेल्थ सेन्टरमा कार्यरत दुई पुरुष नर्सले सुत्केरी व्यथा लागेर भर्ना भएकी दीक्षा कवरलाई हेर्दै थिए । पुरुष नर्स अमृतलालले बच्चा जबर्जस्ति तान्ने प्रयास गरे । बच्चा फसेको थियो । नर्सले जबर्जस्ति तान्दा बच्चाको शरीर छुट्टीएर बाहिर आयो र बच्चाको टाउको पाठेघर भित्र नै रह्यो ।
नर्सले टाउको बिनाको बच्चाको शरीर हातमा आएपछि अर्का एकजना नर्ससंग मिलेर बच्चाको उक्त शरीरलाई मुर्दाघरमा राखिदिए । त्यसपछि परिवारलाई बच्चा मृत जन्मिएको बताए र आमालाई अर्को अस्पतालमा लगेर उपचार गर्न भने ।
अर्को अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने क्रममा डाक्टरहरु अचम्भित भए । किनकि दीक्षाको पाठेघर भित्र बच्चाको टाउको थियो । अहिले दीक्षा गम्भीर अवस्थामा छिन र उनको उपचार भइरहेको छ । दीक्षाका श्रीमानले नर्सहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रहरीले घटनाको छानबिन गरिरहेको छ । हेल्थ सेन्टरका डाक्टरले आफू त्यो समयमा उपस्थित नरहेको बताइरहेका छन् भने नर्सहरुलाई निलम्बन गरेको छ ।
Previousआफ्नै बाबुले चलाएको बसले च्यापेर छोराको मृत्यु
Nextसिड्नीमा सलुन भित्र कपाल काट्दै गरेका युवकमाथी छुरा प्रहार
प्रधानन्यायाधीशलाई नै सर्वोच्चको परमादेश
११ चैत्र २०७३, शुक्रबार ०१:३९
३१ बैशाख २०७४, आईतवार १४:४२
अाज गिरिजाप्रसाद काेइरालाकाे अाठाैं स्मृति दिवस
७ चैत्र २०७४, बुधबार ०४:०६